China Hardware fitaovana miditra amin'ny vanim-potoana varotra volamena sy ny orinasa mpanamboatra | MAXWIN
Hardware fitaovana dia iray amin'ireo indostria sarobidy indrindra ao Shina Science & Technology fitaovana City. Taorian'ny 20 taona mahery ny fampandrosoana, dia lasa goavana. Noho ny miha-matanjaka tsena tinady ao amin'ny firenena, tao anatin'ireo taona faramparany, fitaovana vokatra efa niditra ny varotra volamena period.At ny fiandohan 'ny fivarotana, ny entana isan-karazany no nampidirina. Noho ny fivoaran'ny mety ritra ny tsena tinady, vokatra ireo izay manana fahadisoana eo amin'ny kalitao sy ny fampiharana ny fiainana ireo tsikelikely ho intsony.
Mazava araka izany fa ny milina ao amin'ny orinasa sasany firenena andalam-pandrosoana dia lagging aoriana sy ny fahanterana. Misy fangatahana mafy ho an'ny fitaovana nafarana fitaovana. Saika isan'andro dia misy mpivarotra avy any Afovoany Atsinanana, Afrika, Azia Atsimo sy ireo firenena hafa sy ny faritra avy any amin'ny tanàna fitaovana. Fividianana, ankoatra ny fitaovana mahazatra toy ny fitaovana wrench andian-dahatsoratra, screwdriver andian-dahatsoratra, sodina fitaovana, sy ny fitaovana fanapahana, bebe kokoa ny tena lasa fitaovana vaovao ireo ihany koa ny fitaovana malaza eo vahiny mpanjifa. I miasa ny fitaovana fitaovana raharaham-barotra tao Angola. Misy havany haingana toy eo amin'ny fiainana, ary somary ambany fari-piainana. Nisy mpivady kely ny hety afaka mitondra fiovana be dia be ny fiainany. Noho izany, ao Afrika, ny ambaratongam-mafana fivarotana fitaovana fitaovana tsotra izao mampino. Taloha, no-anarany tarehy fitaovana fitaovana ireo ny Afrikana mpanjifa. Amin'izao fotoana izao, ny isan'ny olona mpanan-karena any Afrika dia mitombo, ary bebe kokoa ny tena fanohanana ny R & D vokatra ao an-tanàna fitaovana tsena manana tombontsoa lehibe indrindra eo amin'ny vidiny fampisehoana. Maro ny fitaovana fitaovana tsy miankina marika lasa iray amin'ireo vokatra malaza indrindra.
Ny fitaovana fitaovana nivarotra ny Hardware City efa nahazo tsena lehibe Mitana anjara amin'ny vidiny, ary tsara fitondran-tena ao amin'ny firenena sy ny tsena ao an-toerana. Taorian'ny tanàna fitaovana efa voangony ampy hery, fa efa nitombo tsikelikely ny isan'ny tokantrano fandraharahana izay nanangana ny fitaovana fitaovana, sy ny fitaovana Lasa fitaovana isan-karazany kokoa sy azo ampiharina kokoa. Misy raharaham-barotra tokantrano no nampihatra ny varotra zavatra niainany nandritra ny taona maro, tsy miankina lasa vokatra vaovao, ary soa aman-tsara ho an'ny Patents ampiharina. Raha vao ireo vokatra vaovao no nampidirina, dia nahazo mpanjifa mafana fo.
Post fotoana: Mar-28-2019
Ratchet Wrench, Ratchet mitambatra Spanner , Truck Wheel Wrench, Ratchet Spanner , Drive Hex Bit Socket , Manamboatra Hand Tools Socket Wrench Set,